घुम्न लायकको पर्यटकीय गन्तब्य झाँक्रीपानी ! | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home आर्थिक घुम्न लायकको पर्यटकीय गन्तब्य झाँक्रीपानी !
घुम्न लायकको पर्यटकीय गन्तब्य झाँक्रीपानी !
२०७७, ६ बैशाख शनिबार ०९:१२
अचेल म्याग्दीको झाँक्रीपानी गाउँ चर्चामा आएको छ । मगर संस्कृति, ग्रामीण जीवनशैली, हिमाली सौन्दर्य, चराको चिरबिर र ऐतिहासिक सम्पदाले भरिपूर्ण झाँक्रीपानी घुम्न लायक गन्तव्य हो ।
मंगला गाउँपालिका–३ मा अबस्थित झाँक्रीपानी (२,२८० मिटर)बाट धौलागिरि, चुरेन, गुर्जा, मानापाथी, अन्नपूर्ण, निलगिरी र माछापुच्छे« हिमाल देखिन्छ । गाउँमा विभिन्न जातजातिको सुवास पनि पाइन्छ । त्यहाँ ५३ घर छन् जहाँ मगर, विक, नेपाली, किसान, बाहुन, क्षेत्री, थकाली, नेवार र छन्त्याल समुदायको बसोबास छ ।
झाँक्रीपानी क्षेत्रको थर्पुमा कोटघर पनि छ । कोटघरभित्र पुराना हतियार खुँडा, तरबार र माटोका गाग्रा छन् । थर्पुमा जेठको तेस्रो मंगलबार धुले मेला लाग्छ ।
झाँक्रीपानीका गाउँले फरासिला र आत्मीय छन् । त्यहाँको होमस्टेमा बस्दा आफ्नै घरमा बसेको अनुभूति हुन्छ । त्यसैले शहरको व्यस्तताबाट उम्केर दुई रात बस्ने गरी यात्रा गर्नु राम्रो हुन्छ । गाउँपालिकाको सहयोगमा गाउँमा तीन तले भ्यू टावर बनाइएको छ । गाउँका २२ घरमा सामुदायिक होमस्टे सञ्चालनमा आएको छ । गाउँलेहरू पाहुनालाई अर्गानिक परिकार खुवाउँछन् । आफ्नो संस्कृति पनि देखाउँछन् ।
झाँक्रीपानीको प्रवद्र्धनमा मंगला गाउँपालिका र उद्योग वाणिज्य संघ म्याग्दीका उपाध्यक्ष राजेश शाक्यले निकै मेहेनत गरेका छन् । ‘हयाङ्आउट हुने हिलस्टेशनका रुपमा हामी झाँक्रीपानीको प्रवद्र्धन गर्दैछौं’, पर्यटन अभियन्ता शाक्य भन्छन्, ‘गाउँलेको आत्मीयता र अर्गानिक परिकारले त्यहाँ पुगिरहन मन लाग्छ ।’
कसरी पुग्ने: काठमाडौं–बेनी २८२ किमि, बसमा ९ घन्टा । बेनी–झाँक्रीपानी २४ किमि, जीपमा दुई घन्टा । बेनीबाट दिउसो ४ बजे बस छुट्छ । बस दुर्दीसम्म पुग्छ, दुर्दीबाट ४५ मिनेट हिँडे झाँक्रीपानी पुगिन्छ । जीप झाँक्रीपानीसम्मै पुग्छ ।
झाँक्रीपानी सामुदायिक होमस्टे
मंगला गाउँपालिका–३, म्याग्दी
Previous articleगाउँका नाकानाकामा बार : गरिब र श्रमिकको बेहाल
Next articleचिउराको भरमा चार सय किमि यात्रा